सरकारी कार्यालय हुँदाहुँदै आफ्नै घरबाट कार्यालय संचालन गर्दै वडाअध्यक्ष » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सरकारी कार्यालय हुँदाहुँदै आफ्नै घरबाट कार्यालय संचालन गर्दै वडाअध्यक्ष
बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ २१:०५ मा प्रकाशित !
कालिकोट । जिल्लाका एक जनप्रतिनिधिले सरकारी कार्यालय हुँदाहुँदै आफ्नै घरबाटै प्रशासनिक कामकाज संचालन गर्दै आएका छन् । सरकारी सेवाको लागि सर्वसाधारणले उनको घर धाउनु पर्ने बाध्य भएका छन् ।
कालीकोटको पचाल-झरना गाउँपालिका वार्ड नम्बर– ९ (कोटीला तिखार्ती) को वडा कार्यालय २०७४ असोज १० गते उद्घाटन गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य ऐना शाही र गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यालय उद्घाटनमा स्थानीयबासीको पनि सहभागीता थियो । तर, सरकारी कार्यालय हुँदाहुँदै वडाअध्यक्ष जोरे तिरुवाले घरबाटै प्रशासनिक कार्य संचालन गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यालय उद्घाटन भएको केही समयभित्रै विवाद सिर्जना गरी तिरुवाले हुकुमी शैलीमा आफ्नै घरमै कार्यालय राखेका छन् ।
सरकारी कार्यालय हुँदाहुँदै वडाअध्यक्ष तिरुवाले आफु्नै घरबाट कार्यालय संचालन गरेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, स्थानीयले गाउँपालिका अध्यक्ष सेजुवालको निरीहताकै कारण आफूहरुले सास्ती भोग्दै आएको सर्वसधारणको आरोप छ ।
वडाबाट दिने सरकारी कामको लागि सर्वसाधारणलाई तिरुवाले आफुनै घरमा २४ घण्टासम्म कुराउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । उनले पहिले आफ्नो नीजि काम सकेर मात्रै सर्वसाधारणलाई सरकारले दिने सेवाका काम गर्दै आएका छन् । एक सेवाग्राहीका अनुसार दिनभरी कुराएर तिरुवा आफ्नो निजी काम गर्न जाने गरेका छन् । सेवा लिन गएका सर्वसाधारण दिनभरी कुरेर पनि साँझ खाली हात घर फर्कन बाध्य छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: प्याकुरेल योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त
NEXT POST Next post: नेपालका ४ खेलाडी आइसिसीमा समावेश
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ २१:०५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ २१:०५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ २१:०५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ २१:०५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, कार्तिक १४, २०७५ २१:०५